တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် Phone Naing | Weenyinthit Bookshelf
ဒီပိုစ့်လေးမှာ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ စာအုပ်လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – မောင်ဘ၀ ညအလားကွယ် တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်- ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန် ကဗျာများ
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – ပညာရဲ့ သဘော
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် – တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – တပြည်သူမရွှေထား
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့် (Glink) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – သူငယ်ချင်းလိုပဲဆက်၍ ခေါ်မည်ခိုင်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – မိုးတွေရွာမှဖြင့်လျှင်ကွယ် (G link) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – လွမ်း (G link) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – လွမ်းတေးမဆုံးစေနှင့် စောသခင် (G link) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – အိုင်ကျူ မည်မျှပုံ၍ ယုံရမည်နည်း (G link) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – မိုးညအိမ်မက်ဖြူ (G link) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် – မျက်ရည်လောကများ၏ ဟိုဘက်မှာ (G Link)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း (From မြန်မာအွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း) _____________________________________________________
19 Responses to “တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်”
LeeOoByaing says:	February 25, 2010 at 4:16 pm	တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏..စာအုပ်များ..အခုလိုတစ်စုတစ်ဝေးတည်းတွေ့ရတာ…အရမ်းကို..ကျေနပ်အားရမိပါတယ်.။
Reply	သီရိ says:	May 17, 2010 at 6:41 am	ဆရာ ဘုန်းနိုင်ရဲ့ စာအုပ်တွေ တတ်အားသလောက်စုစည်းပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Reply	khinsanhtay says:	January 1, 2011 at 7:46 am	တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို…..ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်..။
Reply	Zar Nwe Win says:	April 26, 2011 at 7:28 am	တက်ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ စာအုပ်တွေအတွက်ကျေးဇူးပါ
Reply	hlamin says:	July 4, 2011 at 12:06 am	တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့….ပိတောက်ပွင့်ဆဲ လသာဆဲ ရှိရင်တင်ပေးပါအုံး
Reply	့Hein Htet says:	October 19, 2011 at 7:29 am	ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ.စာတွေအရမ်းကိုကောင်းပါတယ်
သူငယ်ချင်းလို.ပဲဆက်​ရ်ျခေါ်မည် ခိုင် ကို အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်
Reply	သွေးသစ် says:	October 20, 2011 at 4:10 am	ဟုတ်ကဲ့ ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်စာအုပ်တွေကို ကြိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ချစ်သူအိမ်မိုးနောက် လ ပျောက်ခဲ့ခြင်း စာအုပ်လေးကို ဖတ်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Reply	ဝသာန် says:	February 27, 2012 at 4:04 am	အကို ရေ ညီလေးလာသွားပါတယ် ညီဆိုဒ်လးမှာတင်ခွင့်ပေးပါနော် ။
Reply	နိုင် says:	May 18, 2012 at 1:55 am	ဒီနေရာလေကို ရောက်ပြီးမှ တော့ မထွက်ချင်တော့တာတော့ အမှန်ပဲဗျာ။ ကျနော်ဘ၀မှာ အနှစ်သက်ဆုံး အမြတ်နိုးဆုံး စာအုပ်တွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာက ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ပါ ။ ဒီwebsite ကိုဖန်တီးပေးတဲ့ လူတွေအားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်ပြီး ဆရာကြီးလို စာရေးဆရာမျိုးတွေ နောက်စာပေမျိုးဆက်မှာ ပေါ်ပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reply	သူရ says:	July 12, 2012 at 3:21 am	ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့  “လာနရီ ဂင်္ဂါ ဧရာဝတီ” ဆိုတဲ့ စာအုပ် လိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ …. ကျေးဇူးပြု ၍ ကူညီပေးစေချင်ပါတယ် …
Reply	Demigod says:	July 28, 2012 at 5:56 pm	“Kabar kone kyal tha rwate” so te’ e-book ka lay lo chin par tal khanbya.
Reply	Kaung Myat Wai Yan says:	August 3, 2012 at 1:31 pm	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ၊ ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ဝယ် ရှိရင်လည်းတင်ပေးပါဦး။ နာမည်မှားနေတာလေးတွေလည်း ပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။(နှင်းငွေတစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့် ၊ မျက်ရည်လောကများ၏ ဟိုမှာဘက်)
Reply	စောထူးလွယ် says:	August 16, 2012 at 2:03 pm	ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ခုလိုဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိူင်ရဲစာတွေကိုဖတ်ရတာ။
Reply	Min Banyar says:	September 6, 2012 at 5:38 am	I wanna read Pi Taut Pwint Sel La Thar Sel Wel 1,2.Please…..
Reply	နေနိုင်ထူး says:	October 23, 2012 at 9:18 am	ဆရာဘုန်းနိုင်ရဲ့ စာအုပ်တွေစုစည်းတင်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်….
ကျန်နေသေးတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ တင်ပေးပါဦးလို့လည်း Request လုပ်လိုပါတယ်
Reply	ကောင်းထက် says:	November 3, 2012 at 7:54 am	ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗျာ……………….
Reply	Khin Maung Win says:	December 19, 2012 at 7:35 am	ကန္တာဦး စာအုပ်လေး ဘာဖြစ်လို့ မပါတာပါလဲသိခြင်ပါတယ်။
Reply	အောင်စိုး says:	January 22, 2013 at 9:07 am	ကြေးမုံမှာ အခန်းဆက်ဖော်ပြနေတဲ့ နွေကန္တာဦး စာအုပ် အရမ်းဖတ်ချင်ပါတယ်၊ ရှိရင် ကျေးဇူးပြုကြပါခင်ဗျာ။
Reply	ူlumhangyi says:	February 9, 2013 at 1:22 pm	ရှိတယ် မေးလ် လိပ်စာပေး ပို.လိုက်မယ် lumhangyi2012@gmail.com ကို ဆက်သွယ်လိုက်